Kooxda Al-Shabaab oo sii kordhisay go’doomintii Diinsoor | KEYDMEDIA ONLINE
Kooxda Al-Shabaab oo sii kordhisay go’doomintii Diinsoor
Kooxda Al-Shabaab, ayaa halkeedii ka sii wadda cadaadiska dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada Diinsoor ee magaalo madaxda goboolka Bay.
DIINSOOR, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa kordhisay cunaqabateynta iyo go’doominta ay ku hayaan degamada Diinsoor ee gobolka Bay, waxayna billaabeen in ay af-duubtaan dalka degaanka ee isku daya in ay raashin galiyaan magaalada.
Shalay ayay ahayed markii degaan qiyaasti Siddeed KM u jira Magaalada Diinsoor, ay Al-Shabaab ka af-duubteen dad xoolo dhaqato ah, isla markaana maanta lagu arkay tuulada yaaq-barawaay oo degmada Diinsoor u jirta 60 Kiiloo-mitir.
Dhanka kale, Kooxda Al-Shabaab ayaa gor dhow qafaashay saddex kareeto oo degmada Diinsoor badeeco u waday, kuwaas oo marayay inta u dhaxeysa tuulada Misir iyo Diinsoor.
Sida ay xaqiijinayaa dadka degaanka wadayaashii gaadiidka maanta la qafaashay ayaa ka fakaday Al-Shabaab, waxayna lugu ku tageen Diinsoor, qaar ka mid ah wadayaashii Kreetooyinka oo magacooda lala wadaagay Keydmedia Online ayaa lagu sheegay, Ibraahim Boorrow iyo Cali Gees.